U Hton Goldsmith & Jewellery - Myanmar Gold & Jewellery Shop
Myanmar Gold Shop | Yangon Gold Shop | U hton Goldsmith
Myanmar Gold Shop
U Hton Goldsmith , Gold Shop, Myanmar Gold Shop, Yangon Gold Shop.
Creative by Kite Media Group
U Hton Gold Shop in Yangon Myanmar.
ဘောလုံး2ကာလာဘယက်ကြိုး
မြင်သူတကာ ရင်မှာငေးမောစေမယ့် ထူးခြားဆန်းပြားလှတဲ့ ခေတ်မီဆန်းသစ်ဒီဇိုင်းလက်ရာများနှင့် အနုပညာပြောင်မြောက်စွာ အစဥ်အမြဲ မိဘပြည်သူတို့၏ ရင်ခွင်အလှကို ပုံဖော်ထုဆစ်ပေးနေပါတယ်။ ခိုင်ခံ့လှပပြီး အကျစ်ထည်၊ အပွထည်၊ 3D ကျောက်ထည်နှင့် ရွှေသားထည်များကို စိတ်တိုင်းကျ မှာယူနိုင်ပါပြီ။
မြင်သူတကာ ရင်မှာငေးမော စေတဲ့ သူရဲ့ ထူးခြားဆန်းပြားလှတဲ့ခေတ်မီ ဆန်းသစ်တဲ့ ဒီဇိုင်း နှင့် အနုပညာမြောက်အောင် အမြဲ မိဘပြည်သူတို့၏ ရင်ခွင်အလှကို ပုံဖော်ပေးနေပါတယ်။ ခိုင်ခံ့ လှပပြီး အကျစ်ထည် အပွထည် 3D ကျောက်ထည် ရွှေသားထည် များကို စိတ်တိုင်းကြိုက် မှာယူနိုင်ပါပြီ။
ရွှေဆွဲသီး ၊ ရွှေကလစ် ၊ ရွှေဘီးကုတ် ၊ ရွှေဘီး ၊ ရွှေဆံထိုး (20)
ရွှေနားကပ် ၊ ရွှေနားဆွဲ ၊ ရွှေနားကွင်း (17)
ရွှေလက်ကောက် ၊ ရွှေခြေကျင်း (28)
ရွှေဟန်းချိန်း ၊ Anklet (12)
Nice shopping experience, would recommend my friends and family online service is also fantastic.
Aye Myat Thinzar Kyaw
ဦးထုံ ရွှေဆိုအရမ်းကြိုက် ဘယ်လောက်ကြာကြာအရောင်မကျဘူး service လဲကောင်းတယ်။
ဦးထုံဝန်ဆောင်မှုအထူးကောင်း ဈေးနှုန်းချိုသာ ကား parking လည်းအရရှာပေးသည့် service ကို စိတ်ချမ်းသာ မိပါသည်။ ရွှေဝယ်မယ်ဆို ရွှေဆိုရင်ဦးထုံကို အထူးယုံလိုက်ပါ
Eddy Pierre Huang
ဆိုင်မှာဝယ်တုန်းကလည်း အကြိုက်တွေ့တဲ့အထိ စိတ်ရှည်လက်ရှည် ဝန်ဆောင်မှုပေးပါတယ်
ဝယ်ယူသူအပေါ် ယုံကြည်မှု ထားတဲ့အတွက်ကော အချိန်တိကျတဲ့အတွက်ပါ အွန်လိုင်းကနေ မှာရတာလဲ အဆင်ပြေပါတယ်
Aye Cherry Mon
တသိန်းကျော်တန်လောက်လေးကို စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ရှာပေးတဲ့အမတွေရော သဘောကောင်းလွန်းတဲ့ ဆိုင်ရှင်ဦးလေးတို့ အမတို့ကြောင့် နောက်တခါလာဝယ်ပါဦးမယ်လို့ ရွှေဝယ်ရတာ အရမ်းစိတ်ချမ်းသာမိတယ် ဦးထုံရွှေဆိုင် ဒီ့ထက်မက အောင်မြင်ပါစေ
Hnin Wäťí Ôo
onlineကနေ ဝယ်ယူတာ ဝန်ဆောင်မှု အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပုံစံကိုလည်း စိတ်ကြိုက်မှာလို့ရတယ်။
ဒီထက် ပိုပြီး အောင်မြင်ပါစေ ရှင့်။
Zin Mar Hnin
လုပ်ပေးလို့ ဦးထုံကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်ဒီထက်မကအောင်မြင်ပါစေ ဦးထုံ
ကျနော် လက်စွပ် စိန်ပွင့် ၅ လုံး ၅တန်း လေးအား စိတ်ဆိုင်းကြ ချယ်စီပြုလုပ်ပေးပြီး စင်္ကာနိုင်ငံအထိ လာရောက်ပို့ဆောင်ပေးသော ဦးထုံရွှေပန်းတိမ်နှင် ရတနာ ရွှေဆိုင်အား အထူး ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် ခင်ဗျာ ။
Outstanding customer service by the friendliest people and reasonable prices for their beautiful and varieties of designs.
Ni Ni Shwe Win
ယုံကြည်စိတ်ချစွာအားပေးနိုင်ရန် ရွှေထည်ရတနာပစ္စည်းများကို အခေါက်သန့်၊ ၁၅ပဲရည် နှင့် ၁၄ပဲ၂ပြားရည်ပြည့်ဖြင့် အရည်အသွေးအကောင်းမွန်ဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားပြီး လက်ခ၊ အလျော့တွက်များကို အသက်သာဆုံးနှုန်းထားဖြင့် ရောင်းချပေးနေပါပြီ။
၀ယ်ယူထားသောရွှေထည်ရတနာပစ္စည်းများ အချိန်မရွေးပြန်လဲပြန်ရောင်းလျှင် ဈေးကွက်မှန်ကန် အမြင့်ဆုံးဈေးဖြင့် အဆင်ပြေအသက်သာဆုံးဖြစ်အောင်စေတနာထား၍ အာမခံဝန်ဆောင်မှုများပေးနေပါပြီ။
ရန်ကုန်မြို့တွင်း မှာယူသူများအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အာမခံအိမ်တိုင်ရာရောက်ပို့ဆောင်ပေးနေပါသည်။ အခြားမြို့ကြီးပေါင်း(၃၀)ကျော်နှင့် ပြည်ပအော်ဒါထည်များလည်း လက်ခံပေးနေပါပြီ။ Messenger နှင့် Viber မှတဆင့် ဆက်သွယ်ပြီး စိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးနော်
ဦးထုံရွှေပန်းထိမ်နှင့် ရတနာရွှေဆိုင်၏ သမိုင်းကြောင်း